iPad (2019): Kuwa ugu jaban imika ayaa ka weyn [DIB U EEGID] | War gadget
ipad (2019): ugu raqiisan hada ka weyn [DIB U EEGID]
Apple ayaa sii waday inay dib u cusbooneysiiso iPad-ka si ay ula socoto taariikhda iibka iyo wixii ka sarreeya maxaa yeelay Tim Cook (Maamulaha Apple) ayaa halkaas ka sheegay by 2015 in ugu dambeyn iPad-ka uu ku dambeyn doono bedelka PC-ga, wax la arki doono. Dhanka kale, waxay sii wadaysaa inay hagaajiso qaaciddada PC-ga si ay u bixiso wareegto iyo wixii ka sarreeya dhammaan wax soo saar badan oo leh hal muuqaal oo muhiim ah: qiimaha. Ka fog kala duwanaanta Pro iyo kala duwanaanta hawada, Ipad-dhaqameedka wali wuxuu bixiyaa saamiga tayada / qiimaha taas oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh. Ku hel baaritaankayaga qotada dheer iPad-ka 2019-inji ah (10,2), iPad-ka wuu ka jaban yahay sidoo kalena wuu ka weyn yahay.
1 Naqshad: Lagu sameeyay Apple
3 Qeyb warbaahin heer sare ah
4 Isku xirnaanta iyo ismaamulka: Ying iyo Yang
Naqshad: Lagu sameeyay Apple
Shirkadda Cupertino ayaa waxyar uun ka beddeshay iPad-kan tan iyo markii lagu bilaabay heerka naqshadeynta. Waxaan haynaa muraayadaha caadiga ah, oo leh aluminium dhameystiran oo ay ku egtahay oo kaliya astaanta shirkadda, kamarad iyo dib u eegista "iPad". Dhanka kale, dhinaca hore waxaan ku haynaa badhanka Aqoonsiga Taabashada, kamarad sawir qaadis ah iyo gabi ahaanba waxba. Abaabulka badhamada mugga ee dhinaca midig iyo badhanka "awoodda" ee aagga sare weli isma beddelaan muddo ka dib. Waxaas oo dhami waxay inaga reebayaan saami dhan 250 x 174,5 x 7,5 milimitir.
Miisaanka: Gram 483
Cabbir: 250 x 174,5 x 7,5 mm
Dhinaca hore waxaan nahay 10,2 inji, waxaan ka kornay 9,7 inji oo uu iPad-ka jiidayay tan iyo markii la bilaabay. Marka Apple waxay qaadataa fursad ay ku mideyso shaashadda iyadoo la tixgelinayo walaalkiis ka weyn iPad Air, oo leh qiyaas ahaan isku mid. Marka laga hadlayo miisaanka, waxaan ka helnaa 483 garaam, oo aan ka dhigin wax soo saar khaas ah, laakiin waxay dareemeysaa mid adag oo raaxo leh in loo isticmaalo si joogto ah. Waxaan haysannaa xiraha 3,5mm Jack ee sare, ma ahan sidaas USB-C xagga hoose, halkaas oo isku xiraha danab ee shirkadda Apple weli amarro.
IPad-kani wuxuu ku faanaa 3GB xasuusta RAM, 32GB kaydinta aasaasiga ah oo kaliya lagu beddeli karo nooca 128GB (iyada oo aan suurtagal ahayn in la ballaariyo) oo la dhigo Apple A10 processor-ka Fusion, nooc ka mid ah A10-ka la hagaajiyay ee iPhone 7 Plus lagu rakibay xilligaas oo u dhigma processor-ka kan ka horreeyay, jiilka lixaad ee iPad (2018). Tani sikastaba qasab maahan inay cilad tahay, in kasta oo Apple waxbadan dheereyn laheyd, awoodda ayaa la xaqiijiyay inay kufilan tahay.
Tusaale IPad (2019) 10.2
Gacaliye A10 Fusion
Screen 10.2-inji LCD 2.160 x 1620 (264dpi)
Kaamirada sawirka gadaal 8 MP
Kaameerada hore 5 MP
Xusuusta RAM 3 GB
Kaydinta 32 / 128 GB
Akhriska Faraha Aqoonsiga dokumentiga
Batariga 32.4 vh 12W xamuul
Nidaamka hawlgalka iPadOS 13.4
Isku xirnaanta iyo kuwa kale WiFi ac - Bluetooth 4.2 - LTE
Peso Gram 483
Cabbirada X x 250 174.5 7.5 mm
Qiimaha 379 €
Xiriirinta wax iibsiga BUY
Waxay go'aansadeen inay ku sharaddeeyaan horumar kale sida cabbirka shaashadda. Dhanka amniga, waxaan ku sugnaan doonnaa Aqoonsiga Taabashada, waxba kama jiraan aqoonsiga wajiga ee caanka ah ee weli ku xaddidan alaabada Pro iyo iPhones. Imtixaanadeena iPad-ka wuxuu muujiyay inuu yahay mid fudud xitaa wuxuu wadaa iPadOS 13.4, nooca ugu dambeeya ee la heli karo, iyadoo aan xadidneyn dalabyada dalbanaya sida Pixelmator iyo Logitech Crayon smart pen.
Qeyb warbaahin heer sare ah
IPad-kani waa mid kharashkiisu yar yahay, hase yeeshee, taasi maahan dareenka aan ka dareemayno 10,2 ″ shaashad leh 2160 x 1620 qaraar (264 dpi). In kasta oo aan nahay guddi LCD ah, haddana waxaan ognahay rikoodhka rikoodhka Apple ee hagaajinta, heer sare dhammaan dhinacyada. Dhawaaqa wuxuu u taagan yahay nidaamkiisa isteeriyo ee xagga hoose, awood leh oo cad. Kuwo kale oo ku hadla ayaa ka maqan dhinaca kale, laakiin taasi mar kale ayaa lagu xaddiday 'Pro'.
Waxaan sidoo kale helnaa dhibco daciif ah, tan hore ayaa ah taas ma lihin guddi dahaadhay, taas oo ah, waxaan leenahay qol yar oo hawo ah oo u dhexeeya muraayadda iyo guddiga LCD, iPad Air 2 wuxuu ahaa iPad-kii ugu dambeeyay ee muuqaalkan leh iyo "noocyada raqiiska ah ee iPad" nidaamkan ma sii lahan. Way ka jaban tahay dayactirka laakiin maqnaanshahan iyo kan '' True Tone '' waxaan lumineynaa tiro integer ah. Si kastaba ha noqotee, mar kale waxaan helnaa tandem qiimo-tayo sare leh. Waxaan qaadaneynaa fursad aan kaga hadalno kaamirooyinka hadda, 5MP hore oo leh xallinta 720p iyo gadaal 8MP oo leh xallinta 1080p oo si fudud nooga saari doonta jidka loo maro shirarka fiidiyowga, cabbiraadda cabbiraadda ama dukumintiga lagu baarayo, iyada oo aan la sii kala qaadin.
Isku xirnaanta iyo ismaamulka: Ying iyo Yang
Waxay u muuqataa in hadda iPad-ka ugu jaban sidoo kale ay ku jiraan Smart Connector dhinaceeda, taas oo noo ogolaaneysa inaan ku darno aalado dibada ah sida Keyboard Smart ama Keyboard-ka cusub ee Logitech oo waliba ay ku jiraan trackpad. Tani waxay fureysaa fursadaha kala duwan ee iPad gaar ahaan tan la xiriirta.
Halka aan ka helno barta "taban" waa maqnaanshaha USB-C, halka iPad Pro ay ku dhex jirto iPad-kan (2019) waxaan dareemeynaa inaan ku xirnahay isku xiraha danabka markale taasi waxay sii wadaa inay na siiso a 12W xamuulka ugu badan (adoo adeegsanaya adabtarada). Tani waxay xaddideysaa fursadaha marka ay timaado isku xirka aaladaha dibedda sida ilaha keydinta oo markaa ka faa'iideysata codsiyada Faylasha awoodda leh ee iPadOS ay ku jiraan. Ma iloobi karno in iPad-kani uu si buuxda ula jaanqaadi karo jiilka koowaad ee qalinka Apple (ma aha kan labaad).
Batariga weyn ee iPad-ka iyo maareynta ay iPadOS 13.4 ka sameyso ayaa noo ogolaanaya maalmo shaqo. Waa inaan sii wadnaa inaan u tixgalino iPad-kan inuu yahay aaladda ugu weyn ee wax lagu cuni karo, way ku qanacsan tahay Netflix, Disney + iyo aalado kale, laakiin kuma hor dhacdo Word, Pixelmator iyo codsiyo kale oo gabi ahaanba u heellan abuurista nuxurka. Waa inaan xasuusnaano in iPad-kan, mahadsanidiisa iPadOS 13.4, uu noo ogolaanayo inaan ku xirno aaladaha dibada iyadoo loo marayo Bluetooth sida teebabka iyo jiirka.
Weli waa mid ka mid ah wax soo saarka ugu fiican ee la xiriira tayada / qiimaha ay Apple ku hayso kaydkeeda, waxaan ka heli karnaa 356 euro bogagga internetka sida Amazon, inkastoo xaqiiqda ah in cutubka la tijaabiyay uu nooga baxay 233 euro dalab ku meel gaar ah oo gaar ah. Xusuusnow in sheygan laga heli karo labada cirro iyo qalin iyo casaan, labada kaydinta aasaasiga ah 32GB iyo 128GB iyo nooc kaliya leh WiFi iyo mid kale oo sidoo kale ay kujirto isku xirnaanta LTE iyadoo loo marayo eSIM. Ipad-kani wuu koray wuuna ku qancay waqtiyadan, waayo-aragnimadu waxay ahayd mid lagu qanco waxaana si gaar ah loogu talinayaa in lagu cuno waxyaabaha ku jira guriga, si ay ula socoto ardayda iyada oo looga mahadcelinayo beddelkeeda kumbuyuutarka iyo jiirka iyo kuwa u baahan dhaqdhaqaaq lagu daro. miisaaniyad dhimis.
Tayada dhismaha iyo qalabka laga garan karo Apple
Hormarinta joogtada ah ee iPadOS waxay ka dhigtay wax soo saar loogu talagalay abuurida waxyaabaha oo aan kaliya cunin
Waxay hoos u dhigeysaa mid ka mid ah qiimaha ugu wanaagsan ee Apple ee alaabada lacagta
Shaashadu waxay ku korortay ku dhowaad hal inji, laakiin waxay sii wadaan inay ku sharaddeeyaan LCD-da dhaqameed iyada oo aan shaashadda la shaacin
Qalabku aad ayuu qaali u yahay iyadoo la tixgelinayo qiimaha badeecada
Isku xiraha USB-C wuxuu ka dhigi lahaa badeecad calan leh
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » ipad (2019): ugu raqiisan hada ka weyn [DIB U EEGID]
Ma loo baahan yahay in la isticmaalo VPN?
Goobaha ugu fiican ee laga soo dejisan karo buugaag bilaash ah